Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo sharuudo adag duldhigay wadahadalada madaxweynaha galmudug – Balcad.com Teyteyleey
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir oo hada Xabsi guri ku jira ayaa shuruud ku xiray in wadahadal la yeeshaan Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf .
Cali Gacal ayaa sheegay in isaga in Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ay wali ku jiraan Xabsi guri loona diiday in ay dhaq dhaqaaqan, waxa uuna tilmaamay in uusan wadahadal gali karin qof aan xor aheyn oo meel lagu xabisay.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa shuruud uga dhigay wadahadal ay la galaan Madaxweyne Xaaf in ay ka horeyso in marka hore laga saaro xabsi guriga ay ku jiraan isaga iyo masuuliyiinta kale.
”Qof aan xor aheyn oon dhaq dhaqaaqi karin wadahadal ma gali karo, marka hore waxaa muhiim ah in la isweeediiyo sababta xuriyada noolaga qaaday kadibna markan xor noqonayo aan wax waliba kawada hadalno iyada oo loo dhan yahay” Ayuu yiri Cali Gacal.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in uu bur buray wadahadaladii ay wadeen xubno katirsan labada Aqal ee Baarlamaanka, waxa uuna tilmaamauy in xubnahaasi ay ahaayeen xubno kooban oon wada matalin bulshada degta deegaanada Galmudug .
Magaalada Cadaado waxaa dhawaan gaaray Xildhibaano taageersan Siyaasada Madaxweyne Xaaf kuwaa oo ku fashilmay in ay xaliyaan xiisada Galmudug, waxa ay sidoo kale Xildhibaanadan ku guul dareesteen in Xabsi guriga laga saaro Masuuliyiinta Xaaf u xiran.
The post Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo sharuudo adag duldhigay wadahadalada madaxweynaha galmudug appeared first on Ilwareed Online.